အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ASEAN အရှေ့တောင်အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို အွန်လိုင်း ကနေစတင်နေဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခွင့်မရပါဘူး။ မြန်မာ နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး အာစီယံအသင်းကြီးရဲ့လုပ်ဆောင်မှုဟာ ပြင်းထန်တိုးတက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြည့်အ၀တော့လုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ NUG ၀န်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်မျိုးမင်းက မြင်ပါ တယ်။ တချိန်ထဲမှာဘဲ နိုင်ငံတကာအသိုင်းရဲ့ NUG အပေါ်ထောက်ခံအားပေးမှုတွေလည်းတိုး တက်လာတယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောဆိုပါတယ်။ ၀န်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကို ကိုဇော်မိုးကျော်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်။
ကိုဇော်မိုးကျော်။. ။ အာဆီယံအရှေ့တောင်အာရှအသင်းကြီးက မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ကိုလည်း မဖိတ်ဘူး။ စစ်ကောင်စီ ရဲ့ အကြီးတန်း တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းမဖိတ်ဘူး။ ခုလိုဖိအားပေးထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့လေ။ အာဆီယံအသင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် အတော်ပြင်းထန်တဲ့ကိစ္စလို့ ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီအာဆီယံအသင်းရဲ့ အခုလိုလုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG အနေနဲ့ ဦးအောင်မျိုးမင်း အနေနဲ့ဘယ်လိုတုံပြန်ပြောဆိုလိုပါသလဲခင်ဗျ။
ဦးအောင်မျိုးမင်း ။. ။ အာဆီယံရဲ့မူ အာဆီယံရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရဆိုရင် အခုလိုမျိုး အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမှာ မင်းအောင်လှိုင်ကို တက်ဖို့အတွက် သူတို့လက်မခံဘူးဆိုတာ တော်တော်ပြင်းထန်းတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အာဆီယံမှာ သူရဲ့ ပေါ်လစီနဲ့ တခြားနိုင်ငံရေး ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်ရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စ၊ နောက်တခါ အာဆီယံက နိုင်ငံတွေအားလုံးရဲ့ သဘောတူညီချက်ကို ရယူပြီးမှ ဆန္ဒတူညီပြီးမှ လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကို အမြဲတန်းကိုင်စွဲပြီးမှ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် တခါမှ ဒီလောက်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။ ဒါတောင်မှ ကျနော်တို့ အားမလိုအားမရဖြစ်တာရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကို တက်ရောက်ခွင့်မပေးပေမယ့် နည်းနည်းအဆင့်နိမ့်ပြီးလာလို့ရှိရင်လည်း လက်ခံမယ်ဆိုပြီး ပြောကြားတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်တယ်။ လုံးဝအပြည့်အစုံရပ်တည်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ အဆင့်နိုမ့်ပြီး တွေ့ဆုံမယ်သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်နဲ့တော့ သိပ်ပြီးတော့ သဘောကျတာတော့မဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျ။
ကိုဇော်မိုးကျော် ။.။အခုဆိုလို့ရှိရင် ဒီကုလသမဂ္ဂကလည်း မြန်မာစစ်ကောင်စီကို အသိအမှတ်ပြုတာမျိုးမလုပ်ပါဘူး။ နောက်အာဆီယံကလည်း မဖိတ်ကြားဖူးပေါ့နော်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေးမှုတွေ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် တော်တော်လေးကို ချိတ်ဆက်မှုရှိရှိလုပ်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ နိုင်ငံတကာ စစ်မျက်နှာမှာ ဘယ်လိုတိကျခိုင်မာမှုရှိတဲ့ရလာဒ်ရနိုင်မလဲ။ ဥပမာ NUG ကို အသိအမှတ်ပြုလာမလား။
ဦးအောင်မျိုးမင်း ။.။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာဆိုလို့ရှိရင် ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက် ချက်ချင်းကြီး NUG ကို အသိအမှတ်ပြုဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာ ကြည့်တဲ့အခါမှာ NUG ကို အစိုးရတရပ်အနေနဲ့ တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုပေမယ့် အစိုးရတရပ်ကဲ့သို့ တွေ့ဆုံနေတဲ့ကိစ္စတခုပါ။ အမေရိကနိုင်ငံဆိုရင် သူရဲ့ State department ရဲ့ အကြံပေးနဲ့တွေ့နေတာလည်းရှိတယ်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့လည်း တွေ့နေတာရှိတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း သူတို့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်နေတာရှိတယ်။ တချိန်တည်းမှာ ကျနော်တို့နဲ့တွေ့နေတဲ့အခါမှာ တင်ပြတဲ့အချက်တွေ ဒါတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဒါက အမေရိကန်တနိုင်ငံတည်းပါ။ နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် နိုင်ငံတွေရဲ့လွှတ်တော်တွေက တောင်းဆိုမှုတွေများလာပါပြီ။ လွှတ်တော်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို အစိုးရက အလေးထားလုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက် ဒီအချက်တွေက ဖြစ်ကိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အာဆီယံအတွင်းမှာတော့ နည်းနည်းခက်ခဲတာပေါ့။ အာဆီယံအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံပြီးတော့ ပြောကြာတဲ့အချက်တွေ၊ ကျနော်တို့ရဲ့တင်ပြချက်တွေကို နားထောင်ပြီးတော့ ဒီထက်ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကလည်း လျှော့တွက်လို့တော့မရဘူးခင်ဗျ။
ကိုဇော်မိုးကျော် ။. ။ အာဆီယံကတော့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို မဖိတ်ဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့ အဲဒီ
တော့ အာဆီယံနဲ့ NUG ရဲ့ဆက်ဆံရေးကကော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ဦးအောင်မျိုးမင်း ။. ။ အာဆီယံအနေနဲ့ မဟုတ်ပေမယ့် အာဆီယံအတွင်းက နိုင်ငံတွေအကြားမှာ တွေ့ဆုံမှုတွေ ကျနော်တို့ အလွတ်သဘောရှိခဲ့တာ ဒါအားလုံးအသိပါ။ တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီလိုမျိုး အာဆီယံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်ပြီးတော့ တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်း NUG ရဲ့ တောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေက ဘာတွေလဲ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အားလုံးပါဝင်ရမယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေလည်း ပြန်လွှတ်ပေးရမယ်။ အကြမ်းဖက်မှုကိုလည်းရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာတင် ကျနော်တို့က နိုင်ငံဒေသတွင်းမှာလည်း တရုတ်အပါအဝင် နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ချင်တယ်။ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာ ပြောထားတာရှိပါတယ်။ အာဆီယံအသင်းမှာ တရားဝင်စာတွေပို့တာရှိတယ်။ အယူအဆတွေကိုလည်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်။ အာဆီယံရဲ့သူတို့ရပ်တည်ချက်တွေ ဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ တော်တော်များများထင်ဟတ်လာတာလည်း ဒါလည်းထူးခြားချက်တခုပါပဲ။
အောကျတိုဘာလ ၂၆ ရကျနမှေ့ာ ASEAN အရှတေ့ောငျအာရှထိပျသီးအစညျးအဝေးကို အှနျလိုငျး ကနစေတငျနဖွေဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံကစဈခေါငျးဆောငျတှတေကျရောကျခှငျ့မရပါဘူး။ မွနျမာ နိုငျငံနဲ့ပတျသကျပွီး အာစီယံအသငျးကွီးရဲ့လုပျဆောငျမှုဟာ ပွငျးထနျတိုးတကျလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အပွညျ့အဝတော့လုံလောကျမှုမရှိသေးဘူးလို့ NUG ဝနျကွီးတဦးဖွဈတဲ့ ဦးအောငျမြိုးမငျးက မွငျပါ တယျ။ တခြိနျထဲမှာဘဲ နိုငျငံတကာအသိုငျးရဲ့ NUG အပျေါထောကျခံအားပေးမှုတှလေညျးတိုး တကျလာတယျလို့ဦးအောငျမြိုးမငျးက ပွောဆိုပါတယျ။ ဝနျကွီးဦးအောငျမြိုးမငျးကို ကိုဇျောမိုးကြျောက ဆကျသှယျမေးမွနျးတငျပွထားပါတယျ။
ကိုဇျောမိုးကြျော။. ။ အာဆီယံအရှတေ့ောငျအာရှအသငျးကွီးက မွနျမာစဈအာဏာသိမျးခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ ကိုလညျး မဖိတျဘူး။ စဈကောငျစီ ရဲ့ အကွီးတနျး တာဝနျရှိတဲ့သူတှကေိုလညျးမဖိတျဘူး။ ခုလိုဖိအားပေးထားတာတှရှေိတယျပေါ့လေ။ အာဆီယံအသငျးရဲ့ လုပျဆောငျမှုဟာ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ပတျသကျလို့ရှိရငျ အတျောပွငျးထနျတဲ့ကိစ်စလို့ ပွောလို့ရမယျထငျပါတယျ။ ဒီအာဆီယံအသငျးရဲ့ အခုလိုလုပျဆောငျခကျြနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ NUG အနနေဲ့ ဦးအောငျမြိုးမငျး အနနေဲ့ဘယျလိုတုံပွနျပွောဆိုလိုပါသလဲခငျဗြ။
ဦးအောငျမြိုးမငျး ။. ။ အာဆီယံရဲ့မူ အာဆီယံရဲ့လုပျထုံးလုပျနညျးနဲ့ လုပျပိုငျခှငျ့အရဆိုရငျ အခုလိုမြိုး အာဆီယံထိပျသီးညီလာခံမှာ မငျးအောငျလှိုငျကို တကျဖို့အတှကျ သူတို့လကျမခံဘူးဆိုတာ တျောတျောပွငျးထနျးတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အာဆီယံမှာ သူရဲ့ ပျေါလစီနဲ့ တခွားနိုငျငံရေး ပွညျတှငျးရေးကို ဝငျရောကျမစှကျဖကျရဘူးဆိုတဲ့ကိစ်စ၊ နောကျတခါ အာဆီယံက နိုငျငံတှအေားလုံးရဲ့ သဘောတူညီခကျြကို ရယူပွီးမှ ဆန်ဒတူညီပွီးမှ လုပျဆောငျရမယျဆိုတဲ့အခကျြတှကေို အမွဲတနျးကိုငျစှဲပွီးမှ ဘယျနိုငျငံ ဘယျကိစ်စပဲဖွဈဖွဈ တခါမှ ဒီလောကျလုပျဆောငျခဲ့တာမရှိပါဘူး။ ဒါတောငျမှ ကနြျောတို့ အားမလိုအားမရဖွဈတာရှိပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ကို တကျရောကျခှငျ့မပေးပမေယျ့ နညျးနညျးအဆငျ့နိမျ့ပွီးလာလို့ရှိရငျလညျး လကျခံမယျဆိုပွီး ပွောကွားတဲ့ သဘောမြိုးဖွဈတယျ။ လုံးဝအပွညျ့အစုံရပျတညျတာတော့မဟုတျဘူး။ အဆငျ့နိုမျ့ပွီး တှဆေုံ့မယျသဘောမြိုးဖွဈတဲ့အတှကျ ရာခိုငျနှုနျးအပွညျ့နဲ့တော့ သိပျပွီးတော့ သဘောကတြာတော့မဟုတျသေးပါဘူးခငျဗြ။
ကိုဇျောမိုးကြျော ။. ။ အခုဆိုလို့ရှိရငျ ဒီကုလသမဂ်ဂကလညျး မွနျမာစဈကောငျစီကို အသိအမှတျပွုတာမြိုးမလုပျပါဘူး။ နောကျအာဆီယံကလညျး မဖိတျကွားဖူးပေါ့နျော။ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ပတျသကျတဲ့ နိုငျငံတကာ ဖိအားပေးမှုတှေ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးတှမှောဆိုလို့ရှိရငျ တျောတျောလေးကို ခြိတျဆကျမှုရှိရှိလုပျလာတယျလို့ ပွောလို့ရမယျထငျပါတယျ။ အဲဒီတော့ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးနယျပယျမှာ နိုငျငံတကာ စဈမကျြနှာမှာ ဘယျလိုတိကခြိုငျမာမှုရှိတဲ့ရလာဒျရနိုငျမလဲ။ ဥပမာ NUG ကို အသိအမှတျပွုလာမလား။
ဦးအောငျမြိုးမငျး ။. ။ နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝိုငျးကွားမှာဆိုလို့ရှိရငျ ဖွဈလာနိုငျဖို့အတှကျ ခကျြခငျြးကွီး NUG ကို အသိအမှတျပွုဖို့တော့မဟုတျဘူး။ ဒါပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာ ကွညျ့တဲ့အခါမှာ NUG ကို အစိုးရတရပျအနနေဲ့ တရားဝငျအသိအမှတျမပွုပမေယျ့ အစိုးရတရပျကဲ့သို့ တှဆေုံ့နတေဲ့ကိစ်စတခုပါ။ အမရေိကနိုငျငံဆိုရငျ သူရဲ့ State department ရဲ့ အကွံပေးနဲ့တှနေ့တောလညျးရှိတယျ။ အမြိုးသားလုံခွုံရေးအဖှဲ့နဲ့လညျး တှနေ့တောရှိတယျ။ ဒါတှကေိုလညျး သူတို့ တရားဝငျထုတျပွနျနတောရှိတယျ။ တခြိနျတညျးမှာ ကနြျောတို့နဲ့တှနေ့တေဲ့အခါမှာ တငျပွတဲ့အခကျြတှေ ဒါတှကေိုလညျး လုပျဆောငျနပေါတယျ။ ဒါက အမရေိကနျတနိုငျငံတညျးပါ။ နောကျပိုငျးမှာဆိုရငျ နိုငျငံတှရေဲ့လှတျတျောတှကေ တောငျးဆိုမှုတှမြေားလာပါပွီ။ လှတျတျောရဲ့တောငျးဆိုခကျြကို အစိုးရက အလေးထားလုပျဆောငျရတဲ့အတှကျ ဒီအခကျြတှကေ ဖွဈကိုဖွဈလာနိုငျတဲ့အနအေထားမြိုးဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့ အာဆီယံအတှငျးမှာတော့ နညျးနညျးခကျခဲတာပေါ့။ အာဆီယံအတှငျးမှာရှိတဲ့နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးတှနေဲ့ အလှတျသဘောတှဆေုံ့ပွီးတော့ ပွောကွာတဲ့အခကျြတှေ၊ ကနြျောတို့ရဲ့တငျပွခကျြတှကေို နားထောငျပွီးတော့ ဒီထကျပိုမိုပွငျးထနျတဲ့လုပျငနျးတှဖွေဈတဲ့အတှကျ ဒါကလညျး လြှော့တှကျလို့တော့မရဘူးခငျဗြ။
ကိုဇျောမိုးကြျော ။. ။ အာဆီယံကတော့ အာဏာသိမျးစဈကောငျစီကို မဖိတျဘူးဆိုတာမြိုးနဲ့ အဲဒီ
တော့ အာဆီယံနဲ့ NUG ရဲ့ဆကျဆံရေးကကော ဘယျလိုရှိပါသလဲ။
ဦးအောငျမြိုးမငျး ။. ။ အာဆီယံအနနေဲ့ မဟုတျပမေယျ့ အာဆီယံအတှငျးက နိုငျငံတှအေကွားမှာ တှဆေုံ့မှုတှေ ကနြျောတို့ အလှတျသဘောရှိခဲ့တာ ဒါအားလုံးအသိပါ။ တခြိနျတညျးမှာပဲ ဒီလိုမြိုး အာဆီယံရဲ့ကိုယျစားလှယျစလှေတျပွီးတော့ တှဆေုံ့မယျဆိုတဲ့အခြိနျမှာလညျး NUG ရဲ့ တောငျးဆိုတဲ့အခကျြတှကေ ဘာတှလေဲ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ အားလုံးပါဝငျရမယျ။ လကျရှိအခွအေနမှော ဖမျးဆီးထားတဲ့သူတှလေညျး ပွနျလှတျပေးရမယျ။ အကွမျးဖကျမှုကိုလညျးရပျတနျ့ရမယျဆိုတဲ့အခကျြကို ခိုငျခိုငျမာမာ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ တခြိနျတညျးမှာတငျ ကနြျောတို့က နိုငျငံဒသေတှငျးမှာလညျး တရုတျအပါအဝငျ နိုငျငံတှအေားလုံးနဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုလုပျခငျြတယျ။ နိုငျငံတကာအနနေဲ့လညျး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမယျဆိုတာ ပွောထားတာရှိပါတယျ။ အာဆီယံအသငျးမှာ တရားဝငျစာတှပေို့တာရှိတယျ။ အယူအဆတှကေိုလညျး ဆကျသှယျဆောငျရှကျမှုတှရှေိပါတယျ။ အာဆီယံရဲ့သူတို့ရပျတညျခကျြတှေ ဖျောဆောငျတဲ့အခါမှာ ကနြျောတို့ရဲ့ တောငျးဆိုခကျြတှေ တျောတျောမြားမြားထငျဟတျလာတာလညျး ဒါလညျးထူးခွားခကျြတခုပါပဲ။